July 20, 2010 6:50 am
ठुलाबडाहरुको मिचाइमा अनाथहरु
जानी जानी कसैले अनाथहरुमाथि अन्याय गर्‍यो भन्ने सुन्दा जोसुकैलाई पनि अनौठो लाग्नु कुनै नौलो कुरा भएन । वास्तवमा यस्ता घटना हुने गरेको भएपनि अप्रत्यक्ष रुपमा जिम्मेवारी लिने किसिमले संस्थागत रुपमा भएका हुन्छन् । यस्तै निर्णय भएको विषयमा अनाथहरुमाथि र सहायता संस्थाको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरिएको छ ।
भक्तपुरको दुवाकोटमा परोपकार बृद्धाश्रम बन्दै गरेको जग्गामा पार्क बनाउने मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयप्रति परोपकार संस्थाले आपत्ति जनाएको छ । सस्थाको भोगाधिकारमा रहेको जग्गा कब्जा गर्न नपाइने भन्दै विरोध जनाइएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त ठाउँमा स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रतिमासहितको पार्क बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
परोपकार सस्थाले सोही जग्गामा अनाथालय बालग्राम पनि संचालन गर्दै आएको छ । हो, अब भन्ने बेला आएको छ कि, देशमा लामो समय शासन गरेका नेताहरुको सालिक, प्रतिमा, बनाउने हो कि, खान नपाएका, बस्न नपाएका, पढ्न नपाएका बालबालिकालाई अनाथालयको आवश्यकता छ । २०५१ साल असार ९ गते तत्कालिन मन्त्रिपरिषदले भक्तपुर दुवाकोट गाविस ५ को तीन सय २४ रोपनी तीन आना जग्गा परोपकार संस्थालाई दिने निर्णय गरेको र सोही अनुसार भोगचलन गर्दै आएको संस्थाले जनाएको छ ।
एउटा सरकारले गरेको निर्णय उल्टाउने प्रचलनले दुःख पाएका नेपालीको भाग्य नराम्रै भन्नुपर्छ, किनभने यस्तो निर्णयको शिकार परोपकार संस्था अर्थात कैयौं अनाथ बन्नुपरेको छ । संस्था त राम्रो उद्देश्यले स्थापना भयो, काम पनि गरिरहेको छ । तर तत्वहरु यस्ता छन्, जस्ले बाधा बाहेक सिर्जना केही पनि गर्न तम्सेनन् ।
हो, यो विषयको कुरा गर्ने हो भने गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली राजनीतिमा ठुलो योगदान दिएका व्यक्ति हुन् । उनको पार्टीका नेता अहिले पनि सरकारमा छन् । शक्तिमा भएपछि उनको पार्टीले उनको विषयमा जे पनि निर्णय गर्नसक्ने हैसियत राख्छ, बलजफ्ती होस् वा नीतिगत निर्णय । तर त्यसो गर्न सकिन्छ भन्दैमा एउटा अनाथालय बस्ने ठाउँलाई भत्काएर शालिक बनाउनु हिटलर शैलीको काम भएन र ? - महेन्द्र । तस्वीरमा, एक अनाथ बालिका ।
पासपोर्ट काण्डमा शंकास्पद तरिकाले विभाजित सभासद
अनियमितता हुनसक्ने विषयमा निर्णायक तहमा बस्ने मुलीहरुको नियतका विषयमा कतै प्रश्न त कतै शंका उत्पन्न हुनु त्यति अनावश्यक होइन । अर्थात अस्वभाविक पनि होइन । कहिलेकांही त यति विवाद हुन्छ कि, आमसञ्चार माध्यममा विवादको विषयमा जानकारी लिंदा लिंदा वाक्क भइसकेका हुन्छन् आम नागरिक पनि । त्यही भएको छ अहिले, एकातिर सरकार गठनको विषय अनि अर्कोतिर पासपोर्ट ठेक्का ।
मसिन रिडेवल पासपोर्ट -एमआरपी) छपाईका सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिमा काँग्रेसकै सभासदवीच चर्काचर्की भएको छ । छपाई प्रक्रियामा आएका कागजपत्रको अध्ययन गर्ने बिषयमा सभासदकाबीच बिवाद भएको छ । यति विषयमा पनि किन विवाद गर्नुपर्‍यो भन्ने सम्म सभासदमा बुद्धि आएन । छुट्टाछुट्टै दलका नेताबीच विवाद भएको हो भने त त्यसमा पार्टीगत विवाद होला भन्नु, एउटै पार्टीका सभासदबीच नै कुरो नमिल्नु अचम्मको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले एमआरपी छपाई फ्रान्सलाई गर्न दिएका सम्बन्धमा परेको उजुरि र प्रक्रियाका सम्बन्धमा आएका कागज पत्र अध्ययन गर्ने क्रममा त्यसको गोपनियताको बिषयमा काँग्रेसका सभासद वीच भनाभन भएको छ । यहाँ भन्न सकिने दुइटा कुरा हुनसक्छन्, गोपनीयता किन राख्नुपर्‍यो, अनि अर्कोतिर गोपनीयता नराखे पनि हुन्छ । उजुरीका विषयलाई बाहिर ल्याएर बस गरे पो सबै कुरा खुल्ने होला नि, गोप्य राखेर गुपचुप राख्न खोज्ने कारण किन ? समितिको बैठकमा काँग्रेसका सभासद विमलेन्द्र निधि र अजय चौरसियाले एमआरपी छपाई प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाए भने अर्का सभासद दीपकुमार उपाध्ययले कानूनी रितपुराएर छपाई गर्न दिएको बिषयमा अनावश्यक बिवाद गर्न नहुनेमा जोडि दिए ।
सरकार नै ढल्ने गरी यसअघि विवाद भइसकेको विषय अहिले प्रतिस्पर्धा गराएरै पुरा गरिएकोमा त्यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने बाध्यता किन ? कि त, यसरी अनियमितता भयो भनेर भन्नुपर्‍यो, होइन भने अनावश्यक बैठक बसेर समय बिताउनु व्यर्थै होला कि । किनभने त्यही पासपोर्ट नपाएर देशभरका नागरिक राजधानीमा आएर नारायणहिटीको पश्चिम गेटमा घण्टौं लाइनमा बस्न बाध्य छन् । आफुहरुलाई नपरेपछि सभासदहरुले समस्या नै बुझ्दैनन् कि भन्ने अनुभुति भइरहेको छ ।
बरु यो विवादले त कर्मचारीहरुलाई दोष दिन खोजेको मात्रै आभाष भएको छ । कि त प्रक्रिया नै गलत छ भन्नुपर्‍यो, होइन भने कमजोरी कहाँ भयो भन्नुपर्‍यो, र उपाय बताइदिनुपर्छ, होइन भने बिनाकारण विवाद गर्नु समयको बर्बादी मात्रै हो, आखिर सभासदहरुको म्याद पनि त धेरै छैन । - महेन्द्र ।
सहिष्णुताको अभावमा जकडिएको खाल्डो
काठमाण्डौं उपत्यका केही वर्षयता देशका कुनाकाप्चादेखि मात्र होइन विश्वका धेरै ठाउँका मान्छे बस्ने सप्तरङगी स्थान हो । सप्तरङगी, संस्कृति, रितीरीवाज, चालचलन, भाषा सबैमा छ । अझ उपत्यकाको विशेष पहिचान नेवार समुदायका चाडपर्व, भाषा, सरल स्वभाव पनि कम्ती रोचक लाग्दा अर्थात् सजिलो खालका छैनन् । तर कहिलेकांही केही कुराले भने बडो उथलपुथल नै ल्याइदिन्छन् ।
सायद केही मानिसलाई निराश तुल्याउने कुराहरु एकीकृत माओवादी लगायतका जातीय संगठनले उठाएको जातीय राज्यको कुरा अनि जातीय अग्राधिकार कुरा नै हुनुपर्छ । जातीय राज्यको कुराले उपत्यकालाई मात्र होइन, देशका धेरै भागलाई पनि समातेको छ जहाँ विभिन्न जातजाति बस्छन्, तर उठ्ने बेलामा एउटा वा कुनै निश्चित जातिको मात्रै कुरा उठ्ने गर्छ । यो विवादबाट कोही पनि, कुनै पनि विवादमुक्त छैनन् ।
यसै क्रममा नेवाः स्वायत्त राज्य मंकाः संघर्ष समितिले काठमाण्डौ महानगरपालिका कार्यालयमा ५१ प्रतिशत नेवार समुदायका कर्मचारी हुनुपर्ने माग गर्दै विरोध कार्यक्रम गरेको छ । समितिले २०६३ पुस २५ गते निकालिएको कर्मचारी भर्ना विज्ञापनको परीक्षा रद्द गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ । २९ जना कर्मचारी राख्नुपर्नेमा २८ जना गैर नेवार समुदायको राखिएको र त्यसमा पनि अनियमितता भएको आरोप समितिको छ ।
हो, यस्ता धेरै परीक्षाप्रणाली छन्, जसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरी छ । यसमा आफ्नो समुदाय स्थानीय भएकाले आफुहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने तर्क न्यायसंगत पनि होला । तर प्रतिनिधित्वको कुरालाई लिएर परीक्षाप्रणालीका विषयमा सोही प्रशासनसँग विवाद गर्न जानु कति सही होला ? किनभने अनियमितताको छानबिन गर्ने वा कारबाहीका लागि अन्य सरकारी निकाय पनि छन् ।
नगरपालिकाको वजेटको २५ प्रतिशत नेवारी परम्परा, साहित्य, जात्रा लगायतमा खर्च गर्नुपर्ने माग समितिले राख्नुभन्दा विज्ञहरुको सहभागितामा महानगरपालिकामा बस्ने सबैको हितमा बजेट खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिलेको जमानामा चाडपर्व मात्रै मनाएर पैसाको खोलो बगाउनु उपत्यका बाहिरका गरिब नेपालीका लागि अन्याय पो हुनजान्छ कि । किनभने देशका धेरै नागरिक खान बस्न नपाउनेजस्ता आधारभुत आवश्यकताबाट वञ्चित छन् ।
अझ राखिएका माग मध्ये महानगरपालिकावाट निकालिने हरेक विज्ञापन नेवारी भाषामा हुनुपर्ने भन्नेजस्ता कुरा पनि गैर नेवार समुदायलाई सूचनाको हक तथा रोजगारीको हकबाट वञ्चित गर्ने मनसायबाट व्यक्त गरिएका छन् । यस्तो असहिष्णुता हुने हो भने अर्कोले अर्कोलाई क्षति पुर्‍याउने अवस्था आयो भने कस्ले लिने जिम्मेवारी ? -महेन्द्र । तस्वीरमा, महानगरपालिकाको कार्यालय ।
विश्वविद्यालयमा सधैं हुने खेल
प्लस टु शिक्षाप्रणालीमा विद्यार्थी धेरै सफल भएपछि यसका राम्रा र नराम्रा पक्षबारे बहस हुन थालेको हो । जुन अस्वभाविक पनि होइन । तर प्लस टुलाई सुधार्दै लैजानुपर्ने, प्रमाणपत्र तहको सही विकल्प नहुन्जेल सञ्चालन गर्ने भन्नेजस्ता विषय पनि सधैंका सधैं अन्योलमा रहेका छन् । बरु खुरुखुरु सरकारले एउटा निर्णय गर्छ, विद्यार्थी संगठनहरु आफ्नै तालमा हिंडिरहेका हुन्छन् ।
पछिल्लो समय पनि यही भएको छ । प्रमाणपत्र तह खारेजी गर्ने सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै आएका १३ विद्यार्थी संगठनले त्रिभूवन विश्व विद्यालयको प्राज्ञिक सभा बहिष्कार गर्नेजस्तो काममा उत्रिएर विरोधका शैली अपनाउने गरेका छन् भने विश्वविद्यालय र सरकारी निकायले भने एकोहोरो रट दिइरहेका छन् । अर्थात् सरकारी निकायले प्रमाणपत्र तह खारेज हुनैपर्छ भनेपछि प्लस टुको उच्च निकाय उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदलाई अहिलेको अवस्थामा पनि सक्रिय बनाएका पाइन्न ।
सक्रिय बनाएको भए देशका अनेक ठाउँमा सम्बन्धन प्राप्त नभइकन प्लस टु किन सञ्चालन गरिन्थे । विद्यार्थीको भविष्यमाथि किन खेलवाड हुँदा पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइन्नथ्यो । परिषद अन्र्तगत सञ्चालन हुने छात्रवृत्तिमा भनसुन भएजस्तै सम्बन्धन नलिइकन नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने गैरकानुनी काम गरेपनि त्यसमा पनि सरकारी अधिकारी र विद्यालय सञ्चालकबीच रकम आदनप्रदान त भएको छैन ?
त्यसो त कारबाहीका विषयमा एक अधिकारीले अर्कोलाई औंला ठड्याउने प्रवृत्ति पनि निकै नै छ । यो त भयो प्लस टु सुधारको कथा । अर्कातिर भने विद्यार्थीहरुले केहीले आफ्ना माउ पार्टीको इसारामा त केहीले विना स्पष्ट उद्देश्य आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिरहेछन् । यो शिक्षाप्रणालीको बारेमा के गर्दा ठ्याक्कै ठीक हुन्छ भन्न नसकिरहेको अवस्था पनि छ ।
बरु विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेपाली शिक्षा प्रणालीलाई समय अनुकुल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएर आफु कामचलाउ मात्रै भएको प्रमाणित गर्न खोज्छन् । यस्तो विवाद प्रत्येक वर्ष आउँछ, यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि किन कानमा तेल हालेर बसेको त यत्रो १३ महिनासम्म । आउँदो बजेटको रकम भने सबैभन्दा ठुलो अरे । कुनै योजना छैन, सुधारका कार्यक्रम छैनन्, पैसा मात्रै देखाएर त भएन नि ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मात्रै ३ लाख ६९ हजार ८ सय ८० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यत्रो युवाशक्तिको बारेमा निर्णय गर्नुपर्दा केवल एक महिनाको बहस र झगडाले त पक्कै पनि नपुग्नुपर्ने हो । -महेन्द्र । तस्वीरमा, त्रिविवि भवन ।
अपराध लुकाउन ढाँटेर मात्र पुग्दैन
एकीकृत माओवादी नेताहरुले 'प्रतिक्रियावादीहरुले हाम्रा आदरणीय कमरेडमाथि अनावश्यक लाञ्छना लगाउन पनि पछि परेनन्' भनेर चिनियाँ व्यापारी लुट्ने नेताको बचाउ गर्लान् नै भनेको त्यस्तै भने । उनीहरुले त्यही शब्द नै त प्रयोग गरेनन्, पत्रकारहरुसँग कमै बोल्न खोजेका नेताहरुले अप्ठेरो मानीमानी भएपनि आफ्नो स्ट्यान्ड भने देखाएकै छन्, त्यो पनि प्रवक्ताले ।
पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा प्रवक्ता शर्माले चिनियाँ व्यापारीमाथि भएको लुटपाटको घटनामा संलग्न केन्द्रीय सदस्य कालीबहादुर खाम लामो समयदेखि पार्टीको सम्पर्कमा नरहेको दाबी गरेका छन् । केन्द्रीय सदस्यलाई तह लगाउन नसक्ने हो भने के को पार्टी चलाएको भनेर पत्रकारले प्रश्न गरेनछन् क्यार । त्यसो भए गाँठी कुरा खुल्थ्यो कि ।
वास्तवमा एकीकृत माओवादी मात्र होइन, क्रान्तिकारी भन्ने सबै पार्टीहरुले आफ्ना नेताहरुलाई ठीक ठाउँमा राख्ने कुरामा सजग हुनैपर्छ । हो, सरकारमा जाने कि नजाने, सरकारको नेतृत्व गर्ने कस्ले भन्नेजस्ता विषयमा मन्त्री हुने लोभले नेताहरु के बोल्छन्, के भन्छन्, कसैको सम्झनामा हुन्न । जे मन लाग्यो त्यही बोल्न थालेपछि ध्यान जाने कुरा पनि भएन । तर नेताहरु बढी स्वच्छन्द भएपछि अपराधकर्म तिर पो लागेछन् ।
पार्टीलाई बद्नाम गराउने उद्देश्यले खाम विरुद्ध झुठो प्रचार गरिएको माओवादी प्रवक्ताले भनेका छन् । के त्यसो भए उनकै पार्टी प्रतिपक्ष भएको राज्यबाट सञ्चालित प्रहरीले बेकारकै काम गरेको होला त ? पटक्कै होइन होला, किनभने त्यहाँ प्रमाण छन् । केवल प्रमाण, नेताहरुका बोलीजस्ता अर्थहीन विवरण छैनन् । कम्तीमा तिनलाई मनन् गरेर सुधारतर्फ त लाग्नुपर्छ नि, छैन ।
प्रहरीले एकीकृत माओवादीका कालीबहादुर खामको काठमाण्डौंस्थित निवासमा छापा मारी चिनियाँ ब्यापारीलाई लुट्ने ८ जना लुटेरालाई नै पक्राउ गरेको छ । कसैको स्कुलमा, कसैको घरमा जर्बजस्ती बसेजस्तो गरी ती लुटेरा जर्बजस्तै बसेका त पक्कै होइनन् । सबैभन्दा ठुलो प्रमाण नै यही हो । तर यसलाई बेवास्ता गर्नु अर्को ठुलो कमजोरी हो । बरु संलग्न भनिएकालाई कानुनी दायरामा ल्याउन पो प्रयत्न गर्ने हो कि । - महेन्द्र । तस्वीरमा, अभियुक्त कालीबहादुर खाम ।
परिषद विवादका नाममा कार्यकर्ता बचाउ अभियान
केही समयअघि एउटा समाचार थाहा पाइएको थियो, धरानमा क्षेत्रीय रंगशाला बन्नुपर्ने माग राखेर स्थानीयबासीले जिल्ला बन्द गरेको छ । प्रायः विरोधमा बन्द हुने भएपनि यो माग राखेर बन्द गरिएको हुनाले, त्यसमा पनि रंगशाला बन्नुपर्ने माग राखेर गरिएको हुनाले केही फरक लाग्न सक्छ, तर त्यो दृष्टिभ्रम मात्रै पो हो कि, किनभने बन्द भनेको जेका लागि गरिएपनि त्यो घातक बाहेक केही पनि हुन्न ।
हो, यो बन्द निम्त्याउन सक्ने क्षमता भएको विषयले नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकायमा नै हलचल ल्याइदिएको छ । हलचल ल्याइदिएको छ, त्यो पनि सरकारकै समीकरण बिगार्नेगरी । अहिले नै सो समीकरण बिग्रेको अवस्था त छैन तर कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ बनेका विभिन्न निकायहरुमा यो घटनाले झनै चिसोपना ल्याउने पक्का छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिनालाई नै बर्खास्त गरिएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्री गणेश तिबारी नेपालीले पदीय मान्यता विपरित गएको भन्दै उपाध्यक्षबाट बर्खास्त गरिएको जानकारी दिएका छन् । मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेको क्षेत्रीय रंगशाला सुनसरीको इटहरिमै बनाउने निर्णय उल्ट्याएर धरानमा बनाउनुपर्ने दवाव दिंदै गत शुक्रबार तिम्सिना आक्रामक बन्दा खेलकुद परिषदमा तोडफोड भएको थियो भने दुई जना घाइते भएका थिए । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सदस्य सचिव हरिबाबु चौधरीमाथि नै हातपात हुन थालेपछि प्रहरीले तिम्सिना र सदस्य किशोर राईलाई पक्रेको थियो ।
तोडफोड गर्ने समूहको नेतृत्व परिषदकै उपाध्यक्ष तिम्सिना र सदस्य राईले गरेको जनाइएको थियो । इटहरीमा रंगशाला निर्माण गर्न गरेको निर्णय उल्टाउन माग गर्दै सदस्य सचिव हरिवाबु चौधरीलाई दबाब दिन पुगेको उक्त समूहलाई चौधरीले सरकारले गरेको निर्णय आफुले उल्टाउन नसक्ने जवाफ दिएका थिए । उल्टाउन सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषय एकातिर छँदै छ । तर कुरो भने विवादको हो । तमलोपाका मन्त्री र उनका कार्यकर्ता हरिबाबु चौधरी, एमालेका तिमल्सिना, अनि कुरो मिल्छ कसरी ?
जे मा पनि कुरो मिल्नुपर्ने चलनका कारण सबैतर्फ डामाडोल भएको हो, अरु केही पनि होइन । सरकारको निर्णय भएपछि त्यसलाई दबाब र धम्कीका भरमा एमाले पक्षधरहरुले किन अभियान चलाएका हुन्, चौधरीका मन्त्रीले पनि त्यतिबेला यस्तो निर्णय किन गरेका हुन् । सबैलाई थाहा छ, राजनीतिक स्वार्थ छ । तर बेइज्जत भने नेपाली खेलकुद जगतकै भएको छ । बर्खास्त र नियुक्तिको नाटकबाहेक केही पनि भएन । -महेन्द्र । तस्वीरमा, परिषदको कार्यालय ।
जता पनि सुनसान, जता पनि पीडित
दशा लागेपछि यस्तै हुने रहेछ भन्ने उक्ति अहिले पनि सुन्न, प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । अदृश्य शक्तिको कारणले दशा लाग्ने भनिएपनि यसको कारण भने कृत्रिम नै हो कि भन्ने अड्कल काट्न थालिएको छ । सबै क्षेत्रमा छ यो हालत्, त्यसले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि छोडेको छैन । स्वास्थ्य अर्थात् अस्पताल, गाउँका स्वास्थ्य चौकी, जिल्ला अस्पताल, शहरका क्लिनिक सबैमा यसको प्रभाव परेको छ ।
प्रभाव अर्थात असर नै परेको छ । प्रभाव सकारात्मक परेको भेटाउन निकै गाह्रो छ । गाउँका अस्पतालमा, स्वास्थ्य चौकीमा चिकित्सकका लागि सरकारी कोटा भएपनि चिकित्सक जान नमानेको भन्ने सामान्यजस्तै भइसकेको छ । जसले गर्दा बिरामी, कि त उपचारै नपाएर पीडित बन्नुपरेको छ भने केही क्षमता भएका भने समय लगाएर भएपनि नजिकैको शहरमा उपचार गराउन आउने गरेको यथार्थ त छँदैछ, जसले पीडित नै हुने हुन् बिरामी पनि आफन्त पनि ।
गाउँमा चिकित्सक नहुनु, शहरमा छ्याप्छ्याप्ती हुनुको असर गाउँमा मात्रै होइन, शहरमा पनि परेको छ । हो, धेरै चिकित्सकलाई फाइदा होला, अस्पताल, पोलिक्लिनिक, क्लिनिक गएर आम्दानी भएको छ । तर सञ्चालकहरुलाई भने घाटै छ भन्दा फरक नपर्ला । च्याउसरी बजारमा उमि्रएका अनेक खालका क्लिनिकको मागअनुसार बिरामी आपुर्ति नभएपछि के होला, कुरेर बस्ने । कुरेर बसेपछि आम्दानी हुने त भएन, अनि घाटा । स्वास्थ्य केन्द्रीकृत भएको बेफाइदा यो पनि देखियो ।
शहरमा बस्ने निश्चित मानिसहरुले यो फाइदा पाएका छन्, पाउनु राम्रो कुरा पनि हो । तर यो पनि त एउटा नकारात्मक पक्ष हो नि । गाउँमा पनि सुनसान, शहरका धेरै अस्पताल र क्लिनिक पनि खाली । हो, आधारभूत सेवा भएकोले टाट पल्टिने अवस्था नहोला, तर दक्ष जनशक्ति र स्रोत साधनको सदुपयोग हुन नसकेको अवस्था हो यो ।
डाक्टर गाउँमा गएनन् भनेर गुनासो गर्नु पनि कसरी । भोग्नेहरु भन्छन्, पढ्न टाठो विद्यार्थीले एमबीबीएस पढ्न चाह्यो भने उसले ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । रातदिन नसुतेर, त्यत्रा लाख खर्च गरेर पढ्ने, गाउँमा अधिकृत तहको मात्रै कमाई हुन्छ भने उसलाई पनि चिकित्सक नभएका ठाउँमा जाउ बाबु भनेर कसरी भन्ने ? समस्या सबैतिर छन् । एकातिर पढ्ने खर्च जुटाउन, प्रतिपस्र्धा गर्न गाह्रो छ भने अर्कोतिर त्यसरी उत्पादन भएका चिकित्सकहरुले शहरमा बाहेक आमनागरिकलाई उपचार दिन सक्ने अवस्था पनि छैन । -महेन्द्र । तस्वीरमा, मध्य नेपालको एक गाउँ ।
July 06, 2010 6:31 am
निगमको होइन नागरिकका खल्ती चुहिने भए
नेपाल आयल निगमले बेलाबेलामा भन्ने गर्छ कि निगम घाटामा गएर थामिनसक्नु भयो । बेलाबेलामा भन्नु उपयुक्त नहोला, निगमले वर्षमा दर्जनौं पटक यो गुनासो गर्छ । मुल्य भने बढाउँछ त्यस्तै वर्षको चारपटक । मुल्य रोक्न नसक्ने सरकार पनि कमजोर, मुल्य स्थिर राख्नका लागि समन्वय गर्न नसक्ने निगम प्रशासन पनि कमजोर । यसको असर खेप्नुपरिरहेको छ सबै नागरिकले ।
निगममा हुने गरेका भनिएका अनियमितता कारणले धेरैले भन्ने गरेका छन् कि, निगममा चुहावट भयो । निगमको चुहावट रोक्न नसकेको अवस्थामा अब भन्नुपर्ने बेला आएको छ कि, निगमका ट्यांकरको चुहावट भएको कुरा गरेर अर्थहीन प्रयास गर्नुभन्दा पनि आफ्नै खल्ती चुहिएको पीडा पोखेर सहयोगको याचना गर्नु उपयुक्त हुने धेरैको व्यक्तिगत धारणा बुझ्न सकिन्छ । तेलको मुल्य बढ्यो कि सबैतिरबाट चुहावटको पीडा बोक्नुपर्ने हुन्छ ।
पछिल्लो समय आयल निगमले पेट्रोलको मुल्य ८२ रुपैयाँ प्रतिलिटरबाट बढाएर ८५ रुपैयाँ पुर्‍याएको छ भने डिजेल र मटि्टतेलको मूल्य ६३ रुपैयाँबाट बढाएर ६५ रुपैयाँ ५० पैसा पुर्‍याएको छ । यो त सानो तथ्यांक होला, अहिलेको लागि । तर अब भोग्नुपर्ने समस्या भने धेरै छन् । एक नम्बरमा सबैभन्दा डरलाग्दो समस्या महँगी नै हो । गाडी चल्ने ठाउँमा सवारी साधनको भाडा वृद्धि देखि विद्युत नभएका ठाउँमा टुकीमा बाल्ने मट्टतिेलको मुल्यवृद्धिले संकटमा पार्छ ।
इन्धनको मुल्य बढेको निहुँमा खाद्यान्नको मुल्यवृद्धि, गाडी भएकालाई इन्धनको मुल्यवृद्धि, सबैतिर मुल्यवृद्धि । यो बाहेक इन्धन पम्पमा मिसावट गर्नेलाई भने मुल्यवृद्धिलाई असर नपर्ने तर इन्धन किन्नेको भने कमसल इन्धन किनेर पनि पैसा नै चुहिने । बजेट आउनेदेखि लिएर विकास निर्माणका काम समयमा नहुने । भएकामा अनियमितता हुने, त्यो पनि सर्वसाधारणलाई खल्ती नै चुहिए सरह । तेल किन्दा बुझाएको करको रकम राजश्वमा जम्मा भएर दुरुपयोग भएपछि त्यसलाई चुहिएको नभनेर के भन्ने ।
यसरी हेर्दा त अब चुहावट, चुहिएको भन्ने शब्दावलीको फेरि परिभाषा गर्नुपर्ने भएको छ । नियन्त्रण गर्न नसकिने भएपछि सरकारी निकायबाट चुहावटलाई उचालेर सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको असुविधामा सदुपयोग गर्नु पनि एउटा उपाय होला कि । तर आवश्यकता यति मात्र होइन, जतिपटक चुप लागेर बसेपनि मुल्य बढाउने अधिकारीहरु हच्किने वाला छैनन् । सडकमा गएर नचिच्याएसम्म अर्थात अन्य तरिकाले दबाब नदिएसम्म भाउ स्थिर राख्ने प्रयास होला भनी आशा गर्नु व्यवहारिक नहोला । -महेन्द्र ।
लाजै नमानीकन एमालेको दाउ
July 04, 2010 7:42 am
जति कुरा नगर्ने भनेपनि उनैको नाम
मनमा आउने को होला... आशयको गीत कुनैबेला नेपाली संगीत क्षेत्रमा निकै प्रचलित थियो । यो मायाप्रेमको विषयमा भएपनि यस्ता केही घटनाक्रम छन् जसका बारेमा जति कुरा गर्दिन भनेपनि उनीहरुले बडो गम्भीर कुरालाई उजागर गरेका हुन्छन्, जसलाई चर्चा नगरीकन सुखै छैन । गीतको आशयमा जस्तै समयसमयमा मनमै आउने गरी सोच्न बाध्य पार्ने अरु कोही नभएर मातृका यादव हुन् ।
यादव नै चर्चामा आउने नहोलान्, किनभने उनले सबै एकीकृत माओवादीको स्रोत र साधन अर्थात लडाइँ गर्ने मानिसको साथ नभएको बेलामा उनले आफैं हिट हुने अवस्था छैन । तर उनका कार्यकर्ताले समयसमयमा गर्ने तहल्काले भने तिनै यादवकै नाम आएको छ । उनी खासगरी भ्रष्ट्राचारका घटना नियन्त्रण गर्ने कुरामा अगाडि छन् । यही देखाउँछ उनका कार्यकर्ताले गरेको कामले ।
पछिल्लो समयमा उनका कार्यकर्ताले बन विभागका महानिर्देशकलाई उनको कार्यकक्षमै कालोमोसो दलेका छन् । राजधानीको त्यो पनि मुटुमै रहेको कार्यालयमा छिरेर कालोमोसो दल्ने, त्यो पनि सानो आँट होला र । बवरमहलस्थित वन विभाग पुगेका ८-९ जना माओवादी कार्यकर्ताले महानिर्देशक माधवप्रसाद आचार्यलाई कालोमोसो दलिदिए । सचेत नागरिक बन उपभोक्ता संघको नाममा कार्यालय निर्माणका लागि काठ माग्ने निहुँ बनाई कार्यालयभित्र छिरेका उनीहरुले आचार्यलाई दुव्र्यवहार गरेका थिए ।
उनीहरुको कार्यालय छिर्ने तरिका पनि योजनाबद्ध नै देखिन्छ । किनभने वन उपभोक्ता समितिको नाम पनि सचेत छ । काम सचेत, उनीहरुले कालोमोसो दलेर आफ्ना नेताविरुद्ध लडेको भनेर सचेत नै काम गरेका होलान् एक तरिकाले । उनीहरुले केही दिन अघि राजधानीमा भएको कार्यक्रममा महानिर्देशक आचार्यले पूर्व बनमन्त्री मात्रिका यादवलाई भ्रष्ट भन्दै अहिलेका बनमन्त्री दिपक बोहोराको प्रशंसा गरेको विषयलाइ लिएर कालोमोसो दलेको बताइन्छ ।
बिचरा अनियमितता गरेपनि ती कर्मचारीले वाहीवाही गरेको भए खुबै खुशी हुन्थे होलान् । तर त्यसो गरेनन् जानेको कुरा बोले होलान् । तर बोहरालाई पनि सही नियत भएका भन्न नसकिएला । बरु चाकडी गर्ने यो प्रवृत्ति देखेर पो दिक्क लाग्छ । यहाँ कानुनको शासन पनि छैन । कालोमोसो दल्ने कसैलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन । पक्राउ गर्ने नै भए त गरिहाल्थे होला नि, तर गरेनन् । के लाग्दो रहेछ र । -महेन्द्र । तस्वीरमा, मातृका यादव ।